သင့်ကလေး အဆင့်ကောင်းစေမယ့် နည်းလေးနည်း - Myanmar Kid World သင့်ကလေး အဆင့်ကောင်းစေမယ့် နည်းလေးနည်း ~ Myanmar Kid World
သင့်ကလေး အဆင့်ကောင်းစေမယ့် နည်းလေးနည်း
11:57 PM ကလေးကျန်းမာရေး
မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ မကြာခဏ ထမင်းလက်ဆုံစားပေးခြင်းဟာ ကလေးကိုကျောင်းစာမှာ ပိုတော်စေကြောင်း လေ့လာချက်များအရ တွေ့ရပါတယ်။
ငါးဟာ ဦးနှောက်နဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကို ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအစားအစာပါ။
3. အိမ်စာလုပ်ဖို့အတွက် ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာထားပေးပါ။
ကလေးစာကြည့်ဖိုနေရာကို ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သီးချင်းသံတွေ၊ စကားပြောသံတွေနဲ့ ဆူညံနေတဲ့နေရာတွေမှာ စာကြည့်ပပပါက ခေါင်းထဲကို စာဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေမှ ခေါင်းရှင်းပြီး စာပိုရမှာပါ။
4. အချိန်မှန်မှန် အိပ်ပါစေ
စာမေးပွဲမဖြေမီညမှာ ပုံမှန်အိပ်ချိန်အတိုင်း အိပ်ရာဝင်တဲ့ကလေးဟာ တစ်ညလုံး စာကျက်နေတဲ့ မိုးချုပ်မှ အိပ်တဲ့ ကလေးထက်စာရင် စာမေးပွဲမှာ ပိုဖြေနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ မကွာခဏ ထမငျးလကျဆုံစားပေးခွငျးဟာ ကလေးကိုကြောငျးစာမှာ ပိုတျောစကွေောငျး လလေ့ာခကျြမြားအရ တှရေ့ပါတယျ။
ငါးဟာ ဦးနှောကျနဲ့ မှတျဉာဏျကို ကောငျးမှနျစနေိုငျတဲ့ အကောငျးဆုံးအစားအစာပါ။
3. အိမျစာလုပျဖို့အတှကျ ဆိတျငွိမျတဲ့နရောထားပေးပါ။
ကလေးစာကွညျ့ဖိုနရောကို ဆိတျငွိမျတဲ့နရောဖွဈအောငျ လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ သီးခငျြးသံတှေ၊ စကားပွောသံတှနေဲ့ ဆူညံနတေဲ့နရောတှမှော စာကွညျ့ပပပါက ခေါငျးထဲကို စာဝငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ တိတျဆိတျငွိမျသကျနမှေ ခေါငျးရှငျးပွီး စာပိုရမှာပါ။
4. အခြိနျမှနျမှနျ အိပျပါစေ
စာမေးပှဲမဖွမေီညမှာ ပုံမှနျအိပျခြိနျအတိုငျး အိပျရာဝငျတဲ့ကလေးဟာ တဈညလုံး စာကကျြနတေဲ့ မိုးခြုပျမှ အိပျတဲ့ ကလေးထကျစာရငျ စာမေးပှဲမှာ ပိုဖွနေိုငျတာ တှရေ့ပါတယျ။